Steel Pipe Outer Wall gbara ọgbụgba ọkụ Machine - China Qingdao Mmetụta Machine
Chọta magburu onwe ya mma ígwè anwụrụ ná mgbidi shot ọgbụgba ọkụ igwe mere na China nke otu n'ime ndị kasị ibu China emepụta na suppliers - Mmetụta Machine, nke bụ otu n'ime ndị a ma ama na ụdị. Leveraging na elu na ngwá na elu usoro, anyị nwere ike na-enye gị dị otú ahụ akụrụngwa na-elu kpomkwem, elu arụmọrụ, pụrụ ịdabere na arụmọrụ ma ogologo lifespan. Mmadụ Bịa na n'ùkwù àgwà ngwaahịa ọrụ anyị factory. Steel tube gbara ọgbụgba ọkụ Machine: Ọ na ọtụtụ-eji maka metal r ...
Chọta magburu onwe ya mma ígwè anwụrụ ná mgbidi shot ọgbụgba ọkụ igwe mere na China nke otu n'ime ndị kasị ibu China emepụta na suppliers - Mmetụta Machine, nke bụ otu n'ime ndị a ma ama na ụdị. Leveraging na elu na ngwá na elu usoro, anyị nwere ike na-enye gị dị otú ahụ akụrụngwa na-elu kpomkwem, elu arụmọrụ, pụrụ ịdabere na arụmọrụ ma ogologo lifespan. Mmadụ Bịa na n'ùkwù àgwà ngwaahịa ọrụ anyị factory.
Steel tube gbara ọgbụgba ọkụ Machine:
Ọ na ọtụtụ-eji maka metal mkpanaka, ígwè tube, mmanụ ala, chemical, electric ike ụlọ ọrụ. Na usoro nke-akpụ, nhazi, ụgbọ njem na-akpakọba na-arụ ọrụ ibe, a ga-enwe oxide mkpuchi, nchara, slag, ájá, mmanụ na ndị ọzọ n'elu. The Steel Pipe Shot ọgbụgba ọkụ Machine nwere ike wetara a ike shot gbawara na nchara anwụrụ elu na mbụ ala, wepụ nchara oyi akwa, ịgbado ọkụ slag na oxide ọnụ ọgụgụ, ma si otú nweta edo dara luster, iji nweta a ezi uche elu roughness, ma melite mkpuchi quality na mgbochi corrosion mmetụta, na-echebe tube na inyịme eji ndụ nke ígwè tube.
The technical parameters dị ka ndị a:
ụdị Irè ihicha obosara (mm) Inlet size of shot ọgbụgba ọkụ ụlọ (mm) Nhicha workpiece ogologo (mm) Erute ọsọ (m / min) Nhicha workpiece ọkpụrụkpụ (mm) Ọgbụgba ọkụ olu (kg / min) First loading ikike (n'arọ) Ventilashion ibu (m3 / h) Total ike (kW)
Previous: Ala Type gbara ọgbụgba ọkụ Machine
Next: Steel efere nhicha Shot ọgbụgba ọkụ Machine
4 tobaim ala Type gbara ọgbụgba ọkụ Machine
Concrete Shot ọgbụgba ọkụ Machine
Gas sịlịnda gbara ọgbụgba ọkụ Machine
H Doo gbara ọgbụgba ọkụ Machine
Ndoli Type Shot ọgbụgba ọkụ Machine
LPG sịlịnda gbara ọgbụgba ọkụ Machine
Monorail Shot ọgbụgba ọkụ Machine
Ibughari Shot ọgbụgba ọkụ Machine
Paver Block gbara ọgbụgba ọkụ Machine
Pipe Mpụga gbara ọgbụgba ọkụ Machine
Pipe Esịtidem gbara ọgbụgba ọkụ Machine
Road Shot ọgbụgba ọkụ Machine
Ala Site Type Shot ọgbụgba ọkụ Machine
Spinner Shot ọgbụgba ọkụ Machine
Steel Bar Shot ọgbụgba ọkụ Machine
Steel Profile Shot ọgbụgba ọkụ Machine
Steel Structure gbara ọgbụgba ọkụ Machine
Steel tube gbara ọgbụgba ọkụ Machine
Waya ntupu-echebe Mmadụ gbara ọgbụgba ọkụ Machine
Waya ntupu ebu gbara ọgbụgba ọkụ Machine
Automatic Nzuzo Core Box Core agbapụ Machine
High Effiicient Aja Ife Ịgwakọta Machine
Full Automatic Na rotatable Shell Core Shootin ...
Environmental Aja abrasive ọgbụgba ọkụ ime ụlọ